Miyaad ka fikireysaa caymiska John Hancock? waxaad ubaahantahay Apple Watch midkoodna ... | Wararka IPhone
Saacado yar gudahood qaar badan oo idinka mid ah ayaa ku raaxeysan doona midkaaga cusub Apple Watch Taxanaha 4, Qalab cusub oo aniga aragtidayda ka muuqda waa midka kaliya ee mudan in la sameeyo isbedelka inta lagu guda jiro sanadkan 2018. Wararka ayaa keena dad badan sidaa darteed haddii aad ka fikireyso inaad wax ka bedesho Apple Watch kani waa waqtigii.
Hagaag, shirkadda caymiska John Hancock ayaa dooneysa inay ka faa'iideysato dhammaan waxyaabaha cusub ee Apple Watch si ay nooga dhigto hoos u dhac ku yimaada caymiskooda oo xitaa noo siiso smartwatch-ka wiilasha baloogga oo bilaash ah. Ma xasuusataa sheeko-yaraha 1984-kii ee George Orwell iyo Walaalkiis Weyn? waxay umuuqataa mustaqbalka inuu yahay diiwaangeli wax kasta oo aan sameyno maalinteenna maanta ... Boodka ka dib waxaan ku siinaynaa dhammaan faahfaahinta dadaalkan oo aan runtii ku arki doonno in badan iyo in ka badan shirkadaha kale ee caymiska ...
Sidii aan soo sheegnay, fikraddu waa taas Qof kasta oo raba inuu ka helo caymis shirkadda John Hancock waa inuu lahaadaa Apple Watch ama smartwatch kasta oo kale oo kormeeraya maalintaada maalin. Smartwatch oo xitaa lagu heli karo bilaash iyadoo kuxiran jimicsiga iyo nooca nolosha aan hogaamino, hadii kale waa inaan marinaa qasnajiga isagoo bixinaya 15 doolar oo dheeri ah (bishiiba) ee ceymiskayaga. Waa in la dhaho diiwaanka waxqabadka aan qabano waa in lagu dhaqaajiyaa Apple Watchkeena laakiin (sida ay yiraahdaan) Wiilasha John Hancock ma heli karaan xogtan ...
Aan aragno waxa ku dhacaya waxan oo dhan, shaqsi ahaan Waxaan u maleynayaa in mar kasta oo aan arki doonno caymis badan oo caafimaad ama nolol taas oo u baahan adeegsiga smartwatch sida Apple Watch si loola socdo dhammaan astaamaheena muhiimka ah sidaas ayaanna ku ogaan karnaa sida aan "caafimaad" u nahay. Wax wanaagsan, iyo wax xun, maaddaama ay jiraan arrimo badan oo kale oo saameyn ku yeelan kara halista aan maanta ku jirno oo aan si dhib yar lagu soo ururin karo dhammaantood iyadoo la adeegsanayo qalab sida Apple Watch ah. Waxaan arki doonaa soo dhaweynta ay shirkadaha kale ee caymiska u leeyihiin arrintan ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Miyaad ka fekereysaa siyaasada caymiska John Hancock? waxaad ubaahantahay Apple Watch midkoodna ...
Tani waa sida Walkie-Talkie uu ugu shaqeeyo daawashada cusub ee 5